Maraykanka Oo Danaynaya Saraakiil Afrikaan Oo Xiriiriya Dagaalka Alshabaab.
Taliyaha Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika, General Thomas Waldhauser ayaa hadalkaasi ka sheegay Kulan ka dhacay Xarunta Taliska AFRICOM oo ku yaalla magaalladda Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Kulankaasi oo socday muddo 2 maalmood, waxaa ka qeyb galay Ku-dhawaad 40 Madaxda Gaashaandhigga ee Qaaradda Afrika, kaasi oo lagu lafa-gurayey sida ugu wanaagsan ee loo xiriirin karo dagaalka Maraykanka kula jiraan Dagaalamayaasha Alshabaab Somalia.
General Thomas Waldhauser waxa uu ku nuuxnuuxsaday inay doonayaan inay Saraakiisha Xiriirinta ee ka socda Qaaradda Afrika inay ka hawl-galaan Xarunta Dhexe ee Taliska AFRICOM ee magaalladda Stuttgart ee dalka Jarmalka.
“Waxaan ku soo dari karnaa halkan ama wxaan awoodnaa inaan aadno halkaasi ma labadooda” ayuu yiri Taliyaha AFRICOM, wuxuuna intaasi ku daray in Codsiga Saraakiisha Xiriirinta Hawlgalkaasi looga dan leeyahay inuu sawir wanaagsan ka bixiyo waxa haatan socda.
Taliyaha waxa uu sheegay inay danaynayaan si loo xaqiijiyo Muuqaalka Hawlgalka Guud in loo baahan yhay inay Saraakiisha Xiriirinta Dagaalka ku sugnaadaan Xarunta Taliska AFRICOM ee magaalladda Stuttgart.
Dhinaca kale, AFRICOM waxay kaloo doonaysaa inay asaasaan Xiriiro dhow la yeeshaan Ciiddanka dagaalka kula jira Kooxaha Xag-jirka ee ku suganGobalka Harrada Chad “Lake Chad region), halkaasi oo ay Ciiddanka Nigeria kula dagaalamayaan Maleeshiyadda Boko Haram ee khatarta ku hays dhowr Waddan oo ku yaalla Galbeedka Afrika.
Kulanka ay AFRICOM ku marti-gelisay ku-dhawaad Madaxda Difaaca ee 40-dal oo Afrikaan ah ayaa ah kii ugu horreeyey ee noocaasi oo ay AFRICOM qabanqaabisay muddo 10-sanno ah.